NamasteSansar: Online News, Entertainment, Movies, Filmy News, Glamour, Wallpapers N More.: अभिनेत्री तथा निर्मात्री रेखा थापा यतिखेर दोहोरो प्रचारको दौडधुपमा
अभिनेत्री तथा निर्मात्री रेखा थापा यतिखेर दोहोरो प्रचारको दौडधुपमा
कार्यकारी निर्माता छवी राज ओझा तथा निर्मात्री नायिका रेखा थापाको चलचित्र "काली' यही असोज २५ गते देखी पर्दर्शनमा आउने भएको छ । त्यसैले अभिनेत्री रेखा थापा यतिखेर दोहोरो दौडधुपमा छिन् । फुलपाती रिलिजको काली र आगामी संविधान सभाको निर्वाचन प्रचारलाई लिएर रेखालाई भ्याइ नभ्याई छ । चावहिलको अम्वे अपार्टमेन्ट देखि पूर्व पति छवि ओझाको नमस्ते नेपाल कार्यालयमा रेखा निकै व्यस्त हुने गरेकी छिन् ।
रेखालाई पर्सा क्षेत्र नम्वर १ बाट आगामी संविधान सभा निर्वाचनको लागी एमाओवादीले प्रत्यक्ष उम्मेरद्वारको लागी सिफारिस गरेको छ । फिल्म र चुनावी प्रचारमा रेखा एक्लो
भने हुने छैनन् । रेखालाई पूर्व पती ओझाले साथ दिने वचन दिएका छन् । आईतबार वानेश्वर हाइटको नमस्ते नेपाल कार्यालयमा फिल्मीखबर पुग्दा छवि आगन्तुलाई स्वागत गर्दै चिया र चिसोको व्यवस्था मिलाउँदै थिए । रेखा भने पार्टीका कार्यकर्ता तथा मिडियाकर्मीसँगको गफमा व्यस्त थिइन्,फिल्मीखबरको रिपोर्ट ।
राजधानी र मोफसलका अधिकांश हल काली रिलिजको लागी बुक गरेका छविलाई प्रश्न सोधियो । कालीको प्रचार त आफैले गरिरहनु भएको छ, अब रेखा जीको चुनावी प्रचारमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ कि ? उनले सहजै उत्तर दिए- ‘यदि रेखा जीले मेरो आवश्यकता महसुश गर्नुहुन्छ भने म चुनावी प्रचारमा हिड्न तयार छु ।’ उनले थपे- ‘रेखा मेरो सन्तान हो । हरेक अभिभावक सन्तानको सफलता माथि खुसी हुन्छ ।’
‘आगामी संविधान सभाको चुनावमा रेखाजीले विजयी हाँसिल गरेर अविर माला पहिरिएको हेर्न चाहन्छु । यसको लागी तन, मन र धनले उहाँलाई सहयोग गर्न तयार छु,’ छबिले भने । रेखालाई हर किसिमको सहयोग गर्न तयार रहेका छबिले आफूहरूको शारीरिक सम्बन्ध बाहेकको सबै सम्बन्ध रहेको बताए । चुनावी प्रचारमा रेखा र छविलाई सँगै देख्न पाइएला त ? त्यो भने प्रतिक्ष्याकै बिषय भएको छ।